Semalt: Ebe nchekwa kachasị mma maka ichekwa Data Data Scraping
Ndi Postgres na-ederede ederede Chinese?
Ụfọdụ webmasters nọ na-ajụ ajụjụ banyere ma Postgres na-ejikwa akụkụ Akwụkwọ Nsọ Grik. Azịza nke ajụjụ a bụ nnukwu ee. Mgbe ị na-eke nchekwa data, ngwa gị na ọkwọ ụgbọala nchekwa data bụ ihe abụọ metụtara ọtụtụ ihe. Postgres bụ ntanetị weebụ nchekwa data na-arụ ọrụ na Unicode nkwado. Na nhazi nke nchekwa data Postgres gị, tụlee ịkọ ntọala UTF-8.
Postgres JSONB vs. NoSQL nchekwa data
NOSQL bụ nnwere onwe ma dị mfe iji nchekwa data na-echekwa data na ụdị edemede. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ewepụta data na ahịa ego, ị ghaghị ịkpachara anya banyere ụzọ echekwara data gị. Nke a bụ ebe nsogbu na-abata. NoSQL nchekwa data adịghị gụnyere nke data usoro checks. Ọ bụrụ na ịchọta nzọụkwụ a, ị kwụsịrị inwe data na usoro a na-apụghị ịkọwapụta.
Postgres, n'aka nke ọzọ, na-enye ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa aka iji nhọrọ ntanetịime data. Postgres, web scraping nchekwa data echekwa, wepụtara data na usoro ọnụọgụ abụọ. Ihe nchekwa data a na-akwado nsụgharị HSTORE na JSON.
Postgres bụ ihe nchekwa data kachasị elu iji chekwaa ọtụtụ data esinyere na asụsụ dị iche iche. Edebere nchekwa data a maka nyocha na nsonaazụ nzacha. PostGres JSONB makwaara maka ịchịkwa ụfọdụ asụsụ asụsụ dị ka Chinese. Ọrụ ndị ọzọ nke Postgres na-agụnye:
Nbudata data na nkwado nkwado zuru oke;
Mgbasa ngwa ngwa na nyocha ọrụ;
Na-echekwa data ahaziri nke ọma site na HTML mkpado;
Weghachite data site na saịtị scrape na ịchekwa ya na nhazi usoro;
Gịnị mere Postgres JSONB?
Ntọala nchekwa bara uru kwesiri ikpochapụ ndetu ma dozie data n'ime otutu dataseti na oge. Ekwela ka nkwụsị na oge oge na-emetụta ọrụ ịme ihe. Postgres na-eji ụyọkọ mkpụrụ ndụ ihe ọkpụkpụ iji gbadaa data n'ime ọkwa data dịgasị iche iche iji weghachite ngwa ngwa.
Ịchekwa data abụghị banyere oge na oge nzaghachi. Imelite ihe na-ewe ya. Jiri ụyọkọ iji jupụta ihe ndị dị n'okpuru ma gbanyụọ ntinye aha gị ruo mgbe i mechara nchịkọta data gị. Nke a na-enyere ndị ahịa aka na-ejikọta dataseti ugboro n'otu.
Ntughari ihe a na-emekarị abughi ihe di mfe. Site na Postgres nchekwa data weebụ, ị nwere ike ịkọwa ngwa ngwa otu ihe site n'ịkọwa isiokwu ahụ n'ahịrị ọzọ ma jikọọ ndekọ ahụ site na iji igodo ndị ọzọ. Ndepụta nọmba integer mba ọzọ iji nweta nsonaazụ gị.
Ị na-emekọrịta akwụkwọ abụọ na tebụl ọdịdị omenala mgbe ị na-echekwa ọtụtụ data? Ọ dịghị mkpa ichegbu banyere nke a. Ka Postgres JSON B rụọ ọrụ ahụ maka gị. Site na Postgres nchekwa data weebụ, ọ dịghị mkpa ịchọtaghachi Source .